Fandalinana ny vatan'olombelona amin'ny 'Equilibrium' avy amin'i Raipun | Famoronana an-tserasera
Rehefa manomboka ny diany amin'ny fisarihana ireo rantsany rehetra ny iray, ny Ny fandinihana ny anatomia olombelona dia tena ilaina mba hisarihana ny sarin'olombelona avy eo. Mampiseho ny taolana olombelona sy ny hozatra ambonin'izany ny sary. Ny fandinihana lalina dia hanome fahaiza-manao ampy ho an'ny mpanao drafitra hahafahany mahatakatra ny tsirairay amin'ireo fanosehana sy sary azo atao mba tsy hila mampiasa modely akory izy hanoratanao endri-tsoratra na sary.
'Equilibrium' dia a sangan'asan'ny menaka sy akrilika izay ohatra tsara amin'izany izay anaovana fandinihana ireo hozatra hita ao aorin-damosina, soroka ary sandry. Ny fahafantarana ny fihenan-dry zareo sy ny fomba fampifanindriana ny iray eo an-tampon'ny iray hafa no ahitana ny iray amin'ireo endrika manandanja indrindra an'ity asa noforonin'ny mpanakanto Raipun ity.
Mitovy aminy ihany sary voajanahary modely zava-dehibe ny fahaizana misarika ny sarin'olombelona, ​​zavatra iray izay tsy maintsy ampifandraisina amin'ny fiainan'ny mpanakanto hofenoina toerana maro an'arivony azon'ny maodely asiana fivoriana iray.
Mampiseho antsika i Raipun ny fandalinanao ireo hozatra ireo hita eo an-damosina sy ny fomba famolahana izay ananan'ilay maodely. Ny tanana voaorina tsara izay mampiseho ny lafiny misy ny zava-misy izay misarika ny sain'ny mpijery ary ny asa iray, izay iray manontolo, dia manana famaranana lehibe.
Mety hahita teboka ratsy toy ireo akanjo ireo isika, fa raha mifantoka amin'ny fandinihana ny vatan'olombelona isika dia asa tsara ny mampiseho ny fomba ny olona dia tsy maintsy manomboka amin'ny endrik'olombelona manao sary be dia be ary mpandinika tsara. Ny teôria dia manan-danja ihany koa mba tsy hanadinoantsika.
Afaka mandalo eo aloha ianao ny Deviantart anao for mianatra bebe kokoa momba ity artista ity antsoina hoe Raipun.
Miaraka amin'ny fifanarahana hafa sy fomba hafa 'Squid' nataon'i Monks.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » 'Equilibrium' amin'ny menaka sy akrilika nataon'i Raipun
Wow eny: =)
Victor Manuel Rivera Zamacona dia hoy izy:
Mahagaga fa ny fampianaran-tena dia manatanteraka ireo asa ireo, ankehitriny, ny zava-dehibe momba ny fampianaran-tena dia ny fananana fahaizana mandray ireo fampianarana, arahaba soa.
Valiny tamin'i Victor Manuel Rivera Zamacona